Covid-19 Dzidzisai Travel Industry zano On Rokufambira | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Covid-19 Dzidzisai Travel Industry zano On Rokufambira
Covid-19. Zvese zvatinoita sekunge tinogona kutaura nezvazvo, uye nokuda kwechikonzero chakanaka. utachiwana Izvi yakabata nyika uye zvachose zvakachinja maonero atinozviita upenyu hwezuva nezuva uye chokwadi Train Travel. Train Travel ari kwadzinoita senga kushandiswa vazhinji kwete kuzvifadza pazororo, asi kuti basa commutes uyewo.
saka, Chii The Train Travel Industry zano On Rokufambira?
Ngatikurukurei zvinotaurwa chitima indasitiri kuita kuti akachengetedzeka. Ruzhinji rwezviteshi zvezvitima zviri kuwedzera yavo yekuchenesa protocol yezvitima nezviteshi. Kunze kuwedzera kuchenesa, kakawanda pamusoro nezvitima uye pazviteshi uyewo zvakawedzera. Kuchenesa kunoitika paawa yega yega uye kunosanganisira kushandisa disinfectant kupukuta pasi handrails, doorknobs, anobata, nezvimbuzi. Zvimwe antibacterial zvinogadzirwa, kusanganisira sanitizers ndokupisika, vari inopiwa pazviteshi, pazvitima, uye munzvimbo dzevashandi.
Train Travel Industry zano On Rokufambira Tip 1: Online Payment
Tinokurudzira kuenda 100% contactless kana uchigona. Kana hamuna akatenga yenyu chitima tikiti paIndaneti nokuti chero chikonzero, kuenda mberi kubhadhara zvose zvinofanira kuva contactless kana zvichibvira. Sei? tsime, pane mashoko vakavhengana. Zvanzi Bank of England rinotaura: "Kungofanana chero pamusoro kuti vanhu vakawanda vanouya neZvapupu, manotsi anogona kutakura utachiona kana mavhairasi. zvisinei, ngozi wakabvunzwa tichigadzirisa polymer katsamba hapana mukuru anobata chero zvakafanana hunoonekwa akadai handrails, doorknobs, kana makadhi echikwereti. ” Kwekutanga ichi mwedzi pepanhau mushumo kwakauraya World Health Organization (WHO) akanga akati Banknotes kungava vachiparadzira coronavirus, saka vanhu vanofanira kuedza kushandisa contactless kubhadhara pachinzvimbo. Asi akabva yakashuma kuti WHO akaramba akati mari yakanga kuparadzira coronavirus, uye kuti akanga "zvisiri" - saka enda mufananidzo.
zvisinei, ngatishonge maviri pamwe chete, ko isu? manotsi Most uye mari vachave zvamboshandiswa ichitongwa vakawanda vanhu , saka kana uri kunetseka, kubhadhara ane contactless kadhi pazvinobvira zvimwe ndiyo nzira kuenda.
Milan kuenda kuRoma neTreni
Florence kuenda kuRoma neTreni
muromo 2: Social Distancing!
Social Distancing zvinoreva NO TOUCHY chero zvaita. asi, chii pamusoro vakatutirana nezvitima, sepombi, uye trams?
Munhu aiwanzotaura Train Travel vachaziva kuti zvingaoma kuramba mashomanana masendimita Ndicho kubva rinotevera mutakurwi, chiregera zvavakabvumirana 1M. In Milan, vakatakurwa vave zano kugara pakatarisana ane chigaro chinhu, chinhu icho vanhu mumaguta zvakawanda vakabatikana anogona hunongotaura hope.
Imwe yeiyo Chitima Inotyisa Kufamba maguta ndeLondon. The Transport kuti London kufukidzwa imwe "kunowedzera rokuchenesa hurumende" kuvandudza utsanana yomuropa pamusoro wacho guru mabhazi, asi chinhu manikidzira mumagariro distancing. Izvi zviri kwauri. Chinokosha ndechekuti iwe unofanirwa kuedza kudzivirira kubata vamwe vanhu. Travel panguva zvishoma vakabatikana nguva kana zvichibvira, vanopfeka magiravhusi kana iwe usingagoni kudzivisa bata njanji, chigaro, nezvimwewo. Takura rwenyu disinfectant nemi. Regai kuvimba Train Stations kupa kwamuri nguva dzose. Nani ngozi pane urombo!
muromo 3: Hauzivi Use Refillable Cups!
The Train Travel Industry mazano pamusoro Rokufambira zvinosanganisira vatungamiriri pamusoro Itai uye regai uye chaunofarira cuppa. Nepo kupinda tsika akatakura uye kushandisa refillable nemikombe kana achibuda uye pamusoro rave kukurudzirwa somunhu eco vanoziva kufamba, tiri kutya ichi hatichamuzivi zvinoshanda.
Vazhinji guru kofi ngetani vari vane uongorore zvakare kupindura coronavirus yatanga, pamwe Starbucks kwenguva wairambidza kushandisa reusable nemikombe - yemanyorero yakagadzirwa chikweshe, girazi, kana yemishenjere - yekuchengetedza vese vatengi nevashandi. kazhinji, unogamuchira dhisikaundi yekuunza yako mukombe, asi iwe unogona kuwana imwe mhinduro ikozvino! Uri kuenda kuti kurasikirwa kuti diki dhisikaundi zvokuzvidzivirira kwezita.
muromo 4: Musabata!
Vanhu vakawanda varikubvunza kana kutora chitima kunoreva zvakawanda mukana wokutapukirwa. Mhinduro pfupi iri kuti kana uri akagara muchitima uye mukati 1-2 mamita ane utachiona munhu kukosora, uri panjodzi chirwere.
Asi chii tinofunga zvakawanda richikoshawo kukuratidza kuti kazhinji ngozi iri utachiona achingoverengera kuti 48-72 maawa ari zvakaoma pamusoro, vakadai handrail. Izvi hazvirevi chete zvinoshanda Zvitima kunyange. Zvingakunyaradza paruzhinji nzvimbo.
Kana uine kubata njanji, mabhatani, matikiti, zvichingoenda zvakadaro, edza kuzviita achingoshandisa ruoko rumwe chete kana nani, kwenyu gokora! Chengeta dzeserura mune rimwe divi "kuchena" uye kugeza nokukurumidza sezvaungagona yako kuenda.
Munich kuenda kuPrague neTreni
Vienna kusvika Prague neTreni
muromo 5: Travel By Train!
Kana uri kuenda parwendo, ngazviitwe nechitima. Tiri kuramba tichiona hapana refunds pamusoro nendege, apo chitima kufamba zvikuru tefa. Normal mashoko uye zvinhu zvinoshanda sokuti vakawanda vendege mhinduro. "Hapana pari hapana shanduko kuti mazano vendege, saka Vols dzedu uchishanda sezvo kuipa uye mureza mashoko uye mamiriro pamusoro matikiti vanoramba kushandisa,"Anodaro easyJet.
Vamwe muvengi vendege vari zvakawanda atiitirewo.. British Airways ari kupa senguva kuchinja pamusoro Vols kuchamhembe kweItaly, apo hanzvadzi dzayo vendege Aer Lingus chinoenda mumwe nani nechipikirwa: "Vaenzi akasika bookings pamusoro aerlingus.com uye chido kuchinja mazuva kana nzvimbo dzavo kuuya ndege vanogona kuzviita."
Frankfurt kuBerlin neTreni
Leipzig kuBerlin neTreni
muromo 6: Rongedzai Your Own Snacks!
Rongedzai pachako nezvikafu zvishoma yenyu kana iwe uri parwendo nechitima. Many trains have vakambovhara yavo Yekutanga Kirasi Lounges uye vakabvisa paboard catering. saka, nguva kuti okusika pamwe lunchboxes dzenyu! Tora dyira kana kutenga rako kubva retailers chiteshi chikafu usati chaienda. zviyero ava chokwadi, yakagadzirirwa kukudzivirira uye kuderedza kupararira pakati COVID-19 utachiwana!
Tinoziva iyi kutyisa nguva. asi, tinokukurudzira kuti urambe wakadzikama uye musoro yenyu nzira utano uye vakachengeteka paaifamba nechitima kana nedzimwe nzira. pa Save A Train tinosungirwa kuunza vatengi edu ose uye tsvimbo vari akachengeteka uye vari kuti musi yose azvino yakachengeteka maitirwo ezvinhu uye kuitika.
Unoda embed yedu Blog romukova “Covid-19: How Train Travel Industry zano On Rokufambira?” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcovid19-train-travel-industry-advise%2F%0A%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Coronavirustravel covid19 chengetedzo Train Travel